I-WANDERLUST: UKUKHANGELA AMAKHOWA-IINDABA ZEMERCURY - IINDABA
I-Wanderlust: Ukukhangela amakhowa
Kumahlathi ashinyeneyo kunye namadlelo, avela kwaye anyamalale - emva koko aphinde avele - ngaphandle kokuhamba. Zinjalo iitalente zamakhowa.
Imnandi xa ingakubulalanga, amakhowa anenzondelelo yempambano. Mhlawumbi yindalo yabo engapheliyo eyenza ukuzingela kube mnandi kakhulu. Okanye into yokuba basinyanzele ukuba sijonge ezantsi, kwezona ndawo zingalindelekanga - i-muck kunye ne-leaf litter - ukujonga umbala ocacileyo.
Abantu bafumana ukukhaba ukuphuma kunye nokuqokelela ukutya kumhlaba wehlathi, ukufumana into ekhangelekayo ekhangelekayo kwindawo yokutyela ekumgangatho ophezulu iya kuthathwa njengento enqabileyo, utsho uAdam Ryszka, umakhi wewebhu kunye ne-fungophile kunye neFungus Federation ehlala kuyo. kwiNtlambo efumileyo yaseSan Lorenzo.
Ngethamsanqa kuthi, sihlala kumda osemazantsi weMushroom Range, ngokutsho kweRyszka. Ngelixa amahlathi ashinyeneyo akuMntla-ntshona wePasifiki anokuziqhayisa ngabantu abomelele ngakumbi, iBay Area inemozulu eshushu kunye neendawo zokuhlala ezizodwa ezixhasa ukuhlukahluka okumangalisayo.
IiNtaba zeSanta Cruz zilikhaya leentlobo ngeentlobo ezingaphezu kwe-1,000, ngokutsho kukaTonya M. Haff, owayesakuba ngumlondolozi weUC Santa Cruz Museum of Natural History Collections.
Ndiyabulela kwi-mycologist uDavid Arora, lo mmandla uzaliswe ngabalandeli befungus. KwakuseSanta Cruz apho u-Arora, owafudukela eGualala, waqala ukufundisa ngamakhowa asendle ekuqaleni kweminyaka yoo-1970s kwaye wabhala iklasikhi yokuchonga, Amakhowa Demystified.
Ubulungu kwi-Santa Cruz-based Fungus Federation, eyasekwa ngu-Arora, ngoku inani lamakhulu. Iqela (Sibeka ulonwabo kwifungus!) Abaxhasi beeklasi zokuchonga, ukuphuma kunye nokutya.
Ukufumana amakhowa asendle, yiya kwiinduli. Xa kunetha imvula, i-spores - kodwa iSilicon Valley iyome kakhulu kwaye isezidolophini ukuxhasa iintlobo ezininzi. (Ngelishwa, ibinguJanuwari owomileyo. Ixesha lamakhowa ngokuqhelekileyo liqala emva kwe-intshi yokuqala yemvula ekwindla kwaye liqhube kude kube ekuqaleni kukaMatshi, kodwa liphazanyiswa lilanga elide. Amakhowa aqhuba kakuhle kwinkungu, nangona kunjalo.)
Ihlathi elixubeneyo elihlala liluhlaza - kunye ne-oki ephilayo, i-tanoaks, i-madrones kunye nemithi ye-Douglas fir - isekela ukuhlanganiswa kweentlobo ezahlukeneyo zamakhowa kuyo nayiphi na indawo yokuhlala. Zinqabile kakhulu kumahlathi e-redwood, ngenxa yenani elincitshisiweyo leentlobo zemithi.
Iindawo zengca yindawo entle yokukhangela iintlobo ezinomdla, ezifana neAgaricus, ekhangeleka ngathi ziitortilla ezilahliweyo. Ngeli xesha lonyaka, usenokuthi udibane neepuffballs, ezibamba ubunzima obuxineneyo bembewu evalelwe kwiqokobhe elishinyeneyo elifana nolusu, elifana neebhola zegalufa ezilahlekileyo.
Nokuba iitshiphusi zokhuni kunye ne-compost zinokubamba iindidi ezimangalisayo.
Xa ukhetha amakhowa awubulali into ephilayo - endaweni yoko, ususa nje esinye seziqhamo ezininzi esizivelisayo ngexesha lokuphila kwayo.
Kodwa ukukhetha akuvumelekanga kwiipaki ezininzi - kwaye ungadli i-mushroom ngaphandle kokujonga enye, mhlawumbi ezimbini, iingcali. Ngo-2007, umakhulu owayetyelele evela eMexico wasweleka kwaye amalungu amahlanu osapho lwakhe agula kakhulu emva kokutya amakhowa awayewakha eWilder Ranch State Park kumantla eSanta Cruz.
(Amabinzana amakhowa owathandayo: Qokelela amaninzi ngaphambi kokuba utye nayiphi na, kwaye kukho abazingeli bamakhowa abadala, kunye nabazingeli bamakhowa abakhaliphileyo, kodwa akukho bakudala, abazingeli bamakhowa abanesibindi.)
Ungazifumana phi? Unyaka ngamnye kunye nenyanga nganye yahlukile - ungafumana ezininzi, okanye ungabikho kwaphela. Nanga amanye amabala acetyiswayo:
I-Santa Cruz: Abazingeli bamakhowa bathontelana ukuya kwikhampasi yase-UC yaseSanta Cruz, elikhaya kwamanye amakhowa axabisekileyo anokutyiwa ehlabathini, kwaye ukuqokelela akuthintelwanga. Khangela abantu abasebenzisa i-ski pole okanye intonga ye-bolete (ethiywe ngosapho lwamakhowa) ukutyhala ingca kunye nomgquba owenziwe ngamaplanga. I-Puffballs ngamanye amaxesha inokubonwa kwi-Great Meadow; abanye banokufumaneka eMima Meadow, eCore West, eJordan Gulch naseSayensi Hill. Kwakhona: uHenry Cowell Redwoods kunye neBig Basin Redwoods iipaki zikarhulumente.
I-Santa Clara County: i-Monte Bello, i-Los Trancos, i-Russian Ridge kunye ne-Coal Creek Open Space Preserves; Henry W. Coe State Park (Flat Frog Trail kunye Springs Forest Trail Loop); Iipaki zeMount Madonna, Sanborn kunye neStevens Creek County.
INqila yaseSan Mateo: iPurisima Creek Redwoods iNdawo eVulekileyo yoLondolozo; San Pedro Valley, Huddart kunye neWunderlich County parks.
Ngoncedo ngesazisi, yiya kuMycoweb’s Fungi yaseCalifornia ( www.mykoweb.com/CAF ) okanye uDavid Arora yonke into ethembisa imvula, kunye nokunye (i-Ten Speed ​​​​Press, 1991) kunye nama-Mushrooms Demystified: IsiKhokelo esiBanzi kwi-Fleshy Fungi (I-Ten Speed ​​​​Press, 2nd ed., 1989).
Kwaye ukudibana nabahlobo kunye namakhowa, joyina iklabhu efana neFungus Federation yaseSanta Cruz ( http://fungusfed.org ), iBay Area Mycological Society ( www.bayareamushrooms.org ), iMycological Society yaseSan Francisco ( www.mssf.org ) okanye iNorth American Mycological Society ( www.namyco.org ).